“Mucaaradku Hadday Doonayaan In Doorashada La Qabto
Home Somali News “Mucaaradku Hadday Doonayaan In Doorashada La Qabto Bisha June, Ha Soo Jeediyaan...
“Mucaaradku Hadday Doonayaan In Doorashada La Qabto Bisha June, Ha Soo Jeediyaan In Lagu Galo Diwaangelin La’aan” Baashe M. Faarax
Guddoomiye xigeenka 1-aad ee Golaha wakiilada Somaliland, Md. Baashe Maxamed Faarax, ayaa ka hadlay qorshe uu soo jeediyey Guddoomiyaha Golahaasi, Md. Cabdiraxmaan Cirro, kaasi oo ahaa in Golaha la kala diro wixii ka dambeeya 26-ka bisha June ee sanadkan.
Guddoomiye Baashe oo maanta saxaafadda kula hadlay Hargeysa, ayaa ku dooday inaan meelna loo dhaafayn Dastuurka Somaliland haddii doorashadu dib u dhacdo, islamarkaana waxa lagu kala baxayaa yahay Sharciga dalka “Dalka Somaliland waxaa u yaala dastuur lagu xukumo, waxa ina kala wadaana waa Dastuurka”. Ayuu yidhi Guddoomiye xigeenku.
Guddoomiye xigeenku waxa uu sheegay in kala diriska Wakiilada ee Wakhtigan aanu Dastuurku saamaxayn “Golaha wakiilada sida loo kala dirayo waxaa fasiraya Dastuurka. Qodobka 56-aad Farqaddiisa 7-aad waxay sheegaysaa Golaha wakiilada sanadka ugu horeeya Muddo xileedkiisa lama kala diri karo. Waxa kale oo ay sheegaysaa inaan Madaxweynuhu kala diri karayn Golaha wakiilada sanadka ugu dambeeya Muddo xileedkiisa” ayuu yidhi Guddoomiye xigeenka Golaha wakiilada ee Somaliland, waxaanu intaasi ku daray inuu jiro sharci caqabad ku ah qabsoomidda doorashada “Xukuumaddu Muddo xileed bay leedahay, wakhtigeeduna wuxuu ku dhan yahay June. Haddii doorashada la qaban kari waayo si kasta ha ku timaaddee, iyadoo dhul gariirna inagu iman, inagaa waxaynu dhiganay inaan doorashada lagu gali Karin Diwaangalin la’aan. Xisbiyada Mucaaradka ahi haddii ay doonayaan in doorashada la qabto June, ha soo jeediyeen in diwaangalin la’aan lagu galo doorashada, waana sidaas sida kaliya ee ay ku qabsoomi karto June”.
Guddoomiye xigeenku waxa uu ka marag kacay eed Xukuumaddu Golaha u jeedisay oo ahayd inaanay wali diyaarin xeerkii lagu dooran lahaa wakiilada “Waa Run oo Xeerkii maanu diyaarin oo diyaar maaha, laakiin xeerka waa la diyaarinayaa marka Golaha wakhtigiisa ayaa la diyaarinayaa, markaa dhibaatadu taas maaha ee waa Diwaangalinta Codbixiyeyaasha. Markaas Komiishanka ayaa laga rabaa Jadwalka doorashada, golahanna diyaar ayuu u yahay doorashada mar Alle markii la muddeeyo doorashada”
“Waxaad Arkaysan Ragga Ku Dhaaranaya Haddii 26-June La Gaadho In Aanay Dawladi Jirayn Hadalkaasina Meel Uu Sharciga Dalka Kaga Yala Ma Jiro”. Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland.
USA:Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Oo Gaadhay Washington Dc